Madaxweynaha Soomaaliya oo ka Hadlay Maalinta 1da Luulyo ee Xornimada Iyo Midnimada Soomaaliya[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka Hadlay Maalinta 1da Luulyo ee Xornimada Iyo Midnimada Soomaaliya[Sawirro]
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo uu joogo ugu hambalyeeyay xuska sannad-guurada 55-aad ee ka soo wareegtay markii ay xoroobeen gobollada koonfureed iyo midowgii waqooyi iyo koonfuur ee dhaliyey Jamhuriyadda Soomaaliya.
Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay munaasabadda xuskan oo ka dhacdey Xarunta Aqalka Dowladda Hoose ee magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in dhalinyaro duruuf adag ku jirta ay ahaayeen kuwii suurageliyey in meel la isugu keeno Soomaalida, lana helo xornimo, sidaa darteedna loo baahan yahay Soomaalida waqtigan casriga ah nool inay ka qeyb qaataan dhismaha Soomaaliya cusub oo horumarsan.
“Ku dhowaad qarni ka hor ayay koox dhalinyaro ah oo geesiyaal ah, waxay isku xilqaameen inay shacabka ka dulqaadaan gumeysiga, wayna ku guuleysteen, iyagoo weliba waqti adag ku shaqeynayey. Inagoo taas ka tusaale qaadaneyna waxaan rabnaa inaan dhisno Soomaaliya ka horumarsan tii hore, ka xooggan, kuna dhaqmeysa nidaam dimoqraadi ah oo shacabka oo dhan raali uu ka yahay’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Waxaa madaxweynaha uu sidoo kale sheegay in 55-kii sanno ee Soomaaliya ay xornimada haysatey ay jireen caqabado qalqal geliyey dowladnimada iyo midnimada, haatanna loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo dhismaha mustaqbal siyaasadeed oo bulshada oo dhan ay qeyb ka tahay.
“Waxaan dhiirigelinayaa dib u heshiisiinta iyo nabad ku wada noolaanshaha, taana waa siyaasadda ay ku dhisan tahay Dowladda Federaalka ee Soomaaliya. Waa inaan is xishmeynaa, is qaddarinaa, lagana fogaadaa ereyada xanafta leh ee dadkeena dib u xusuusinaya waayihii adkaa ee la soo marey. Aan adeegsano luuqad dadka isku keeneysa, dibna farxad iyo is-jaceyl uga dhex abuuri karta quluubta shacabka Soomaaliyeed’’.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in amniga uu yahay tiirka koowaad ee aasaaska u ah in Soomaaliya ay horumar gaarto, isagoo dhanka kalena hambalyo u direy dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhiiggooda , sharaftooda iyo waqtigooda u huraya difaaca dalka iyo dagaalka la doonayo in lagu ciribtiro kooxda nabad diidka ee Al Shabaab.
“Ilaahay ayaa mahad leh inaan si nabad ah halkan ugu xuseyno munaasabadda 1-da Luulyo. Dhalinyaro duruuf adag ku shaqeysa ayaa shaqadan wanaagsan ee amniga lagu sugayo qabtey. Kooxda nabad diidka marna ma oggola in sidan oo kale uu shacabku farxad u wadaago. Waxan halkan ku joognaa caawa waa rabitaanka Ilaahay iyo dadaalka ciidankeena. Marka shacabka waxan ka codsanayaa in tixgelin gaar ah ay siiyaan ciidammadeena hawshaasi adag haya’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Mar uu ka hadlayey barnaamijka Hiigsiga 2016, ayaa Madaxweynaha waxaa uu sheegay in dowladdu ay ka go’an tahay in dalka isbeddel uu ka dhaco, loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo.
“Soomaaliya waxay haysaa dhabbadii ay dib ugu soo noqoneysey nolosha caadiga ee horumarka iyo dimoqraadiyadda. Maqaamkii aan ku lahayn beesha caalamka ayaa soo noqoneysa. Waxaa haatan meel fiican maraya hawlaha dhismaha maamullada iyo baahinta xukunka. Isbeddelada aan dooneyno inaan hirgelino si aan u dhisno qaran dhameystiran waxaa talo ku leh cid kasta oo Soomaaliyeed, beesha caalamka oo iyaguna mar kasta na garab taagan, talo ayaa uga furan nidaamka cusub ee aan dhisaneyno’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale shacabka ugu baaqey inay taageeraan dowladnimada iyo hoggaanka dalka, isagoo intaa ku darey in dowladnimada iyo nidaamka sharciga ah oo la dhowro ay yihiin waxa ugu dambeyn keeni kara in laga guuleysto kuwa diiddan horumarka iyo nabadda, gaar ahaan kooxda nabad-diidka ee Al Shabaab.
Madaxweynaya ayaa salaan sharaf ka qaatey cutubyo ka tirsan Ciidammada Qalabka Sida, isagoo sidoo kalena horkacay calan saarka oo xaley saqdii dhex dhacdey.
Munaasabadda xuska sannad-guurada 55-aad ee xornimada dalka ayaa waxaa sidoo kale ka soo qeybgaley Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka, Mudane Cumar Cabdirashiid Sharma’arke, Ra’iisul Wasaare ku Xigeenka, Mudane Maxamed Cumar Carte, xubno ka tirsan labada gole, taliyeyaasha ciidammada, diblomaasiyiin iyo mas’uuliyiin kale.